सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव – Online Nepalaja
February 18, 2021 79
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विरुद्ध लड्न मा’नव जीवनमा निद्राको ठूलो भूमिका रहने जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे’ले बताएका छन् ।सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक स्ट्या’टस लेख्दै उनले कोरोना संक्रमण लगायतका विभिन्न रोग’हरूसँग लड्नका लागि निद्राको ठूलो भूमिका रहने बताएका हुन् । राति’को समयमा पर्याप्त सुत्ने व्य’क्तिको इम्युनिटी पा’वर राम्रो हुने उनले बताएका छन् ।
हाम्रो जोश, जाँगर, उमंग तथा उत्साह मुर्झा’एको हामीले अनुभव गर्दछौं । त्यस्तै राम्रोसं’ग नि’द्रा परेको समयमा हामी आफुलाई निकै स्वास्थ्य अनुभव गर्दछौं । हाम्रो पूर्वीय दर्श’नमा निद्रालाई आहा’र जत्तिकै महत्व दिइएको छ ।’उनले भनेका छन्, ‘हामी रातिमा ७-९ घण्टा सुत्यौँ भने मेला:टोनिन नामक हर्मोन’को उत्पा’दन राम्रो हुन्छ । जस’ले गर्दा हामी खुसी हुन्छौं साथै रोग’सँग लड्ने क्षम’ता वृद्धि हुन्छ ।’
१४- २५ बर्षको उमेरको व्यक्तिलाई = ८- १० घण्ट२६-६४ बर्षको व्यक्तिलाई = ७- ९ घण्टा ६५ वर्ष तथा सो भन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिलाई = ७- ८ घन्टा
Prevबिहीबारका दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले हुन्छन् यस्ता लाभ
Nextभाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु